Ra’isul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo kui ayaa sii heyn doonta talada dalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra’isul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo kui ayaa sii heyn...
Ra’isul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo kui ayaa sii heyn doonta talada dalka
Ra’isulwasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sii heyn doonta talada dalka, ka dib markii ay Sabtida maanta ah natiijo taariikhi ah ka soo hoysay doorashadii guud ee maanta ka qabsoontay dalkaasi.
Iyadoo la tiriyay inta badan codadka la dhiibtay, ayuu xisbiga Liberal Labour Party ee ra’isulwasaare Ardern helay 49% codadkii dadka codeeyey, halka xisbiga sida aadka ah ula tartama ee muxaafidka ahi uu helay 27% codadkii la dhiibtay.
Caadiyan dalka New Zealand xisbiga talada haya ayaa ku tiirsanaan jiray axsaabta kale ee ku soo xigta si uu dowlad wadaag ah u dhiso, haseyeeshee xisbiga shaqaalaha ayaa guusha xoogga leh ee uu doorashadii maanta ka soo hooyay darteed, aanan u baahnaan doonin in uu axsaab kale la wadaago dowladda.
Khudbad ay boqollaal ka mid ah taageerayaasheeda kula hadashay magaalada Auckland, ayay Ardern ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageeradii ugu badnayd muddo 50 sano oo uu xisbi ka kasbado shacabka New Zealand.
Previous articleNinka FBI ka tirsanaa ee Trump uu aadka u necebyahay
Next articleDowladda Azerbaijan oo sheegtay in weerar gantaalo ah saakay lagu soo qaaday
Muhaajiriintii ugu badneyd sanadkan oo ku dhintay doon ku qallibantay badda Senegeal
Mid ka mid ah hoggaamiyayaasha bulshooyinka Muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska Idriss Sihamedi, ayaa dalka Turkiga weydiistay magangalyo
Reccep Tayyip Erdogan oo aad uga carooday sawir gacmeed uu ka sameeyay wargeyska Faransiiska ee Charlie Hebdo.
Five members appointed by the incumbent Council of Ministers have been...
Ciidamada Danab oo Saraakiil Alshabaab ah dilay